Indrisy mantsy ry Jean fa tsy nasianao maso na teny kely akory ireo havana aman-tsakaiza traboina teto amin’ny tany ama-monina fa ny nataonao ihany no nataonao an ! Dia tsy tahotra tsy henatra ny anao ary tsy niherikerika kely akory nanoloana ireo mpiray tanindrazana maty vokatry ny loza mahatsiravina, fa ny lalanao nankany andafy no nizoranao, ka toy ny miteny aminay hoe aleo ho faty any izay maty fa tsy hampidi-bola hameno ny paosiko. Dia lasa ny saiko hoe mbola mihevi-tena ho filohan’i Gasikara ihany ve ianao io ary mbola mihevitra ny hampiasa ny mikimakinao hiarovan-tseza ? Efa niteny anao foana aho hoe aza manao toetram-boloky ka mamy ny atsy fy ny aroa, ka hafangaro avokoa ny fifanampiana (+) sy ny fifanalana (-), hany ka mitsimbadika ambony ambany ny zava-drehetra. Mbola ho lasa gaigy amin’io ianareo ry Jean fa ataovy ihany. Aiza ve ka rehefa mba vory eny Antsonjombe ny olona dia mba tonga ianareo. Mifamotoana eny Mahamasina ny olona, dia eo ihany koa ianareo fa tsy mba tara. Fa rehefa amin’ilay kajinareo manokana iny ihany ianareo no mahagaga fa tsy mba hitanay mihitsy, saingy rehefa mandinika amin’ny fomba amam-pihetsikareo izahay, dia mivoaka ihany ny marina, ka io no hitenenako anareo hoe tsy misy marina izay tsy hipoitra. Mpamosavy mandeha alina aza, hono, ry Jean misy mahita, ka aza mihevitra anay ho dondrona sy kentrina a !
Marco tonga fofona